GarsoorNews - FASHIL: Xeer Ilaaliyaha oo Nus Milyan Lacaga ku Qaatay Qorshe ay Maleegeen Fahad & Kheyre
by Farah C/laahi | Thursday, Dec 21, 2017 | 994 views
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Dr. Axmed Cali Daahir ayaa todobaadkan sameeyay hadalo Marin kale u leexiyay siyaasadii maalinlaha aheyd ee dalka ka jirtay.
Axmed Cali Daahir oo ka war haya isbadal ku soo socda Laanta Garsoorka dalka ayaa ka faa’iideystay fursad qaali ah oo uu ka helay kooxda Naf la-caariga ah ee Nabad iyo Nolol.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horay u sheegay in cadaalad daro ay hareysay Garsoorka dalka loona baahan yahay in wax laga qabto, sidaasi darted waxaa socda Hanaanka isbadalka Garsoorka oo saameyn doona Axmed Cali Daahir.
Ninkan waa sarkaal dowladda Itoobiya ay u soo dirsatay Soomaaliya, waxana uu xogaha uu ka aruuriyo shakhsiyaadka Itoobiya ay dooneyso uu u dusiyaa Xukuumadda Addis Ababa.
Waa Nin dagan dalka Maraykanka, waxana uu isu arkaa in yahay kan ugu aqoonta badan ee ka shaqeeya Garsoorka.
Axmed Cali Daahir oo xafiiskiisa uu ku sifoobay Musuq-maasuq iyo cadaalad daro ayaa ku sii darsaday in Madaxda Naf la-caariga ah ee hada jooga uu laaluush ka qaato si uu danahooda u fuliyo.
Sida ay Ilo Xog-ogaal ah xaqiijiyeen Axmed waxa uu Nus Malyuun lacag ah ku qaatay Sumcad dilka siyaasiyiin ka tirsan Golaha Shacabka iyo kuwa Mucaarad ku ah dowladda hada jirta.
Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yaasiin ayaa markii hore ku amray Mr. Daahir in uu fuliyo eedeeynta been abuurka ah ee loo jeediyay labo xildhibaan iyo xaragiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Hase ahaatee Axmed oo ka war haya in aan waxba u harsaneyn oo laga ceyri doono shaqada ayaa weydiistay “wixii lagu fulin lahaa shaqadaas”, waxana labadooduba ay u garteen in 500 kun oo lacagta qaranka ah la siiyo.
Axmed ayaa shir saxaafadeedkiisii ugu horeeyay qabtay markii uu xaqiijiyay in lacagtu ay ugu jirto Koontadda Bangigiisa.
Xeer Ilaaliyaha Lacag ayaa ka hadashiisay, Fahad iyo Kheyrana waxa ay hantidii qaranka u adeegsadeen Baabi’inta Umadda iyo kala dilka dadka Soomaaliyeed.